Ungqongqoshe wezempilo ushayele uNjilo ihlombe | Eyethu News
WHO cites Zimbabwe record as outrage grows over Mugabe honour - 20 mins ago
Spain to dismiss Catalonia’s government, call elections - 21 mins ago
Trump says he’ll allow release of Kennedy assassination files - 22 mins ago
Ungqongqoshe wezempilo ushayele uNjilo ihlombe
“Akukakapheli sikhathi singakanani eyiMeya kodwa kuningi asekwenzile.”
Kungesikhathi uDktl Sbongiseni Dhlomo ezivocavoca neMeya yoMsunduzi uKhansela Themba Njilo ngoLwesibili ntambama. Iisthombe :Lethiwe Makhanya
UNGQONGQOSHE wezeMpilo esifundazweni saKwaZulu Natali uDktl Sbongiseni Dhlomo useshayele ihlombe iMeya yomasipala uMsunduzi uKhansela Themba Njilo ngokusungula uhlelo lokuzivocavoca ngaphandle kwase City hall noseludonse amakhulu abantu abajoyinile.
UDhlomo ubengabanye akade bejima lapha ngoLwesibili ntambama kanye naye uNjilo.
UDhlomo uthe benguMnyango wezeMpilo bayaziqhenya ngaloluhlelo lokuzivocavoca olugcina abantu bephilile.
” Kungokokuqala ngqa ukuthi sibone into efana nalena. Kuyasijabulisa ukubona uNjilo ezihlupha ngokugcina abantu bejabulile futhi bephile kahle. Kungumsebenzi wethu njengomnyango ukwenza lokhu ingakho sithanda ukumbonga . Into enhle kakhulu lena ayenzayo iyasijabulisa kakhulu. Asiside isikhathi engenile njengeMeya kodwa usekwazi ukuthi avule indawo efana nalena. Lento iyakhuthaza kakhulu uma singenza kanje siqhubeke. Uyabona labantu abasha abagcwele la uma bephuma baya kogeza balale nokugcina sekubaqhelanisa nokwenza izinto ezingalungile ezifana nezidakamizwa kanye nokuhamba nama blesser. Le video ekade yenziwa lapha nje ngizohamba ngikhombisa ngayo yonke indawo ukuze nabo bezobona bakhuthazeke ,” kubeka uDhlomo .
Uphinde waveza ukuthi akagcinile ukuzovakashela lendawo azozivocavoca kodwa usazophinde abuye, waphinde wanxusa labo akade ezivocavoca nabo ukuba banxenxe nabanye ukuba bajoyine lololuhlelo ukuze bezohlala bephilile.
Uphinde wabalula ukuthi uma sekwethula isabelo zimali uMnyango wakhe uzolubhekelela lolu hlelo .
IMeya uNjilo uthe ujabule kakhulu ngendlela lolu hlelo olukhula ngayo njalo. ” Ngijabula kakhulu njengoba sengizwe ngoNgqongqoshe ethi uzosilekelela loko kunginikeza umdlandla wokuthi ngiqhubekele phambili,”kusho uNjilo .
Uqhube wathi yize loluhlelo ayelenzele abasebenzi balo masipala kodwa manje wonke umuntu wamukelekile kanti kumahhala.
“Baningi abantu asebejoyinile kanti nendawo yethu isiqala ukuba ncane sesizogcina sisukile saya eFreedom square lapho sizokwazi ukuthi samukele khona abantu abayinkulungwane. Sifuna ukugcina abantu bejabulile ngiyafisa ukuthi lokhu kuqhubeke kuze kuye nasemawadini.”